तपाईँ कर्मचारी हो ? व्यक्तिगत इमेल नखोल्नुस् !
काठमाडौं । तपाईं सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने अब व्यक्तिगत इमेल खोल्न पाउनुहुन्न है । सरकारी इमेल नै खोल्नुपर्छ । तर त्यो इमेल पनि तपाईँको पद, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायअनुसारकै हुनेछ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ मान्छेले पहिले नै इमेल ठेगाना दर्ता गराउनुपर्नेहुन्छ । सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व...
गोप्य सूचना चुहावटको आरोपमा फेसबुकविरुद्ध मुद्दा
एजेन्सी । अमेरिकामा फेसबुकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । वासिङ्टनका प्रमुख अभियोजनकर्ताले क्याम्ब्रिज एनलिटिकासँग जोडिएको गोप्य सूचना चुहावट प्रकरणमा फेसबुकको भूमिका पाइएपछि मुद्दा दायर गरेका हुन्। फेसबुकले मुद्दाबारे अध्ययन गरिरहेको बताएको छ ।महान्यायाधीवक्ता कार्ल रासिनले दायर गरेको अभियोगमा फेसबुकविरुद्ध करोडौं...
अश्लील एवं यौनसम्बन्धित थप तीन लाख वेबसाइट बन्द गर्ने सरकारी तयारी
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अश्लील एवं यौनसम्बन्धित थप तीन लाख वेबसाइट बन्द गरिने बताएका छन् । बेथानचोक गाउँपालिका–२ गेल्दुङमा नेपाल टेलिकमले विस्तार गरेको ढुङ्खर्क टेलिफोन (पीएस्टिएन) एक्सचेन्जको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘पच्चीस लाख अश्लील वेबसाइट बन्द गर्‍यौँ,...
काठमाडौं । तपाईको मोबाइलमा नचिनेको विदेशी नम्बरबाट ‘मिस्ट कल’ आइरहेको छ ? छ भने महत्वपूर्ण कल होला भनेर ती नम्बरमा कल फिर्ता नगर्नूस्, तपाईको ब्यालेन्स गुम्न सक्छ । विदेशी ठगहरुले पैसा कमाउन त्यसरी मिस्ड कल गरेका हुन् । ती विदेशी नम्बरमा कल फिर्ता गर्दा मोबाइलको धेरै ब्यालेन्स काटिन सक्छ । काटिएको रकमबाट मिस्ड कल गर्ने व्यक्तिले...
गुगलका कर्मचारीलाई यौन उत्पीडनको आरोप, ४८ जना निस्कासित
एजेन्सी । गुगल कम्पनीले यौन उत्पीडन गरेको आरोप लागेका १३ जना वरिष्ठ म्यानेजरसहित ४८ जना कर्मचारीलाई सेवाबाट निस्कासित गरेको छ । सन् २०१६ देखि यौन उत्पीडनको आरोप लागेका उनीहरुलाई गुगलले सेवाबाट निस्कासन गरेको हो । गुगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर पिचईले आफ्ना कर्मचारीको नाममा पत्र सार्वजनिक गर्दै दुर्व्यवहारको आरोपमा यो कडा...
स्मार्ट लाइसेन्स अब दुई महिनाभित्रै, कार्ड निजी कम्पनीले छाप्ने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले एक वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षा गरिरहेकालाई छिटो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजी कम्पनीलाई छाप्ने जिम्मेवारी दिएको छ । मालिका इन्कर्पोरेट लिमिटेडलाई ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रतीक्षा सूचीमा बसेका सेवाग्राहीलाई चालक अनुमति पत्र दिने उद्देश्यले विभागले यो सम्झौता गरेको हो...
एक वर्षभित्र नेपालकै भूउपग्रह
काठमाडौं । रूस (तत्कालीन सोभियत संघ) ले अन्तरिक्षमा पहिलो भूउपग्रह प्रक्षेपण गरेको ६२ वर्षपछि नेपालले बल्ल भूउपग्रह पठाउने चाँजो मिलाउन लागेको छ । नेपालले प्रक्षेपण गर्न लागेको ‘नानो स्याटेलाइट’ (सानो भूउपग्रह) को ‘मोडल’ तयार भइसकेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले जनाएको छ ।् सन् २०१९ अगस्टभित्र...
तीन करोड फेसबुक प्रयोकर्ताको विवरण चोरियो
एजेन्सी । विश्वकै सबैभन्दा चर्चित सामाजिक सञ्जाल कम्पनी फेसबुकले आफ्ना करिब दुई करोड ९० लाख प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणमा ‘ह्याकर’को पहुँच रहेको जनाएको छ । फेसबुकले यसअघि साइबर आक्रमणका कारण पाँच करोड प्रयोगकर्ताका एकाउन्टमा प्रभाव परेको जनाएको थियो । ‘अहिले हामीले के थाहा पाएका छौं भने सोचिएभन्दा केही कम व्यक्तिलाई असर...
अब अनलाइनबाटै मन्त्रीको मोनिटरिङ
काठमाडौं । मन्त्रालय तथा मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरूको कामको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि अनलाइन मोनिटरिङ प्रणाली सुरु भएको छ । ती निकायले अब हरेक महिनाको ७ गतेभित्र अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्नो प्रगति विवरण पेस गर्नु पर्नेछ र त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने भएका छन् । सरकारले...
फेसबुकका ५ करोड प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी
काठमाडौं । सामाजिक सन्जाल फेसबुकका करिब ५ करोड प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी भएको छ । ह्याकरले ह्याक गरेर डाटा चोरी गरेको फेसबुकले जनाएको छ । डाटा चोरी भएको विषयमा कम्पनीले आन्तरिक जाँच गरिरहेको जनाएको छ । ह्याकरहरुले ‘भ्यू एज’ फिचरमा हमला गरेर यसैमार्फत युजर अकाउन्टमा छिरेर डाटा चोरी गरेको बताइएको छ । डाटा चोरी भएको घटना सार्वजनिक...
अटेरी यूटीएलाई प्राधिकरणको पत्र
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) लाई सेवा शुरु गर्न पत्र पठाएकाे छ । टेलिफोनको एकिकृत (युनिफाइड) लाइसेन्स लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम शुरु नगरेपछि प्राधिकरणले पत्र काटेको हो । अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्राधिकरणले सोमबार युटीएललाई पत्र काटिसकेको जानकारी गराए । झाले दिएकाे जानकारी अनुसार...
टेलिकमको प्रि–पेड र पोस्टपेड दुवै मोबाइलमा सम्पर्कनै नहुने समस्या
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको मोबाइल (एनटीसी) मा मंगलबार बिहानैदेखि समस्या आएको छ । टेलिकमको प्रि–पेड र पोस्टपेड दुवै मोबाइलमा समस्या देखिएर सेवा अबरुद्ध भएको छ । मोबाइलमा सम्पर्कनै नहुने समस्या आएपछि लाखौं सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । ल्यान्डलाइन भने पूर्ववत रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । तर मोबाइलको नेटवर्कमा समस्या देखापरेपछि...
कम्प्युटरको भविष्यवाणीले हैजा ‘नियन्त्रण’
काठमाडौं (बीबीसी) । पानीजन्य रोग हैजाको सङ्क्रमण हुन सक्ने स्थानको भविष्यवाणी गर्ने कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोगले यमनमा हैजा सङ्क्रमितहरूको संख्यामा नाटकीय गिरावट आएको बताइएको छ । गत वर्ष एक हप्तामा ५० हजार मानिसहरूमा हैजा सङ्क्रमण भएको थियो। यो वर्ष त्यो संख्या २५ सयमा झरेको छ । नयाँ प्रविधिले सहायताकर्मीहरूलाई सङ्क्रमण हुनु कैयौं...
वाईफाईको प्रयोगबाट बम पत्ता लगाउन सकिने !
काठमाडौं(बीबीसी) । वाईफाईको प्रयोग गरेर सार्वजनिक स्थलमा हतियार वा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउन सकिने अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । ती अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार वाईफाई सार्वजनिक स्थलमा हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने सस्तो प्रविधिको रूपमा विकसित हुनसक्छ। रट्गर्ज विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा गरिएको एउटा...
अब फेसबुक, ट्वीटर चलाउँदा कर तिर्नुपर्ने !
काठमाडौं । अब फेसबुक, भाइबर, ट्वीटर चलाउँदा पनि कर तिर्नु पर्ने भएको छ । सरकारले अब यस्ता सोसल मिडियामा पनि कर लगाउने तयारी थालेको छ । यस्ता सोसल प्लेटफर्ममा कर लगाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य शुरु गरेको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई यस्ता प्लेटफर्ममा कर लगाउनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अब यस्ता...